क्यान्सर स्क्रीनिंग महिलाका लागि: उमेर द्वारा दिशानिर्देशहरू चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार भारी खेल समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी प्रेस कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी कल्याण औषधि बनाम मित्र कम्पनी मनोरञ्जन औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> Cancer क्यान्सर स्क्रीनि women महिलालाई चाहिन्छ
जब तपाईं क्यान्सर स्क्रीनि ofको बारेमा सोच्नुहुन्छ, असहज हुन सक्छ सम्भवतः पहिलो शब्द दिमागमा आउँदछ। यो प्याप स्मीयर हो, म्यामोग्राम हो, वा त्वचा विशेषज्ञमा छाला जाँचको लागि तल झर्ने हो — कुनै पनि परीक्षण विशेष गरी रमाईलो छैन। तर तिनीहरु छन् तपाईंको स्वास्थ्य बचाउनको लागि महत्त्वपूर्ण, तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा।
क्यान्सर स्क्रिनि important महत्वपूर्ण छ किनकि तिनीहरूले लक्षणहरू याद गर्नु अघि तिनीहरूले क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्दछन् रेबेका बेरेन्स , एमडी, एक परिवार चिकित्सक र ह्युस्टन, टेक्सास मा भिडा परिवार चिकित्सा को मालिक। पहिलेको क्यान्सर पत्ता लाग्यो, क्यान्सर बढ्ने र फैल्ने सम्भावना कम (मेटास्टेसाइजिंग)। ठूला क्यान्सर र क्यान्सरहरू जुन मेटास्टेस गरिएको छ उपचार र उपचार प्राप्त गर्न बढी गाह्रो हुन्छ, र लामो अवधिमा जटिलताहरू हुने वा मृत्यु निम्त्याउने बढी सम्भावना हुन्छ।
सम्बन्धित: किन एक राम्रो महिला परीक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ
कसरी थाहा छ रगत को प्रकार तपाइँ संग छ
कसलाई क्यान्सर स्क्रीनिंग आवश्यक छ?
सबै महिलाहरु स्तन क्यान्सर, ग्रीवा क्यान्सर, र कोलन क्यान्सर को लागी जाँच गर्नु पर्छ, भन्छन् अंजली मलिक, एमडी , वाशिंगटनमा एक बोर्ड-प्रमाणित रेडियोलोजिस्ट, डी.सी. यदि तिनीहरू उच्च जोखिममा छन्, उदाहरणका लागि, धूम्रपान गर्नेहरू वा पारिवारिक इतिहास भएका व्यक्तिहरू, महिलाहरूलाई फोक्सोको क्यान्सरको लागि पनि जाँच गर्नु पर्दछ। र आनुवंशिक सिन्ड्रोम भएका महिलाहरू, केहि औषधीहरू लिएर, वा पारिवारिक इतिहासको साथ, गर्भाशय र अग्नाशयको क्यान्सरको लागि पनि स्क्रीनिंग गरिनु पर्छ।
तर के हुन्छ यदि तपाईं अन्यथा स्वस्थ हुनुहुन्छ र तपाईंसँग क्यान्सर जोखिम कारक छैन?
ठूलो शारीरिक स्वास्थ्यमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न कारकका कारण क्यान्सर विकास गर्न सक्छन्, भन्छन् जेफ फोर्टनर, Pharm.D। , ओरेगोनको हिलस्बोरोमा प्यासिफिक युनिभर्सिटी स्कूल अफ फार्मेसीमा सहयोगी प्रोफेसर, र एक सदस्य एकलकेयर चिकित्सा समीक्षा बोर्ड । यी मध्ये केही तिनीहरूको नियन्त्रण बाहिरका छन्, जस्तै पारिवारिक इतिहास, क्यान्सर उत्पन्न गर्ने पदार्थहरूको जोखिम, र बुढेसकाल। जबकि अन्य कारकहरू नियन्त्रणयोग्य छन् जस्तै आहार, मदिरा, र सुर्तीजन्य खपत।
महिलाहरू क्यान्सरको लागि कहिले स्क्रीनिंग गर्ने?
प्रत्येक प्रकारको क्यान्सर आफ्नै उमेरसँग सम्बन्धित जोखिम कारकको साथ आउँदछ। उमेर र क्यान्सरको प्रकारद्वारा महिलाका लागि क्यान्सर स्क्रीनि toका लागि यस गाइड प्रयोग गर्नुहोस्।
ग्रीवा क्यान्सर स्क्रीनिंग उमेर: गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सर स्क्रीनिंग २१ वर्षको उमेरमा नै यौन गतिविधि सुरु भएको उमेरको तुलनामा सुरु हुनुपर्छ, डा। बेरेन्स भन्छन्। यस अनुसार CDC , जबसम्म प्याप स्मीयर परिणामहरू सामान्य हुन्छन्, स्क्रिनहरू प्रत्येक तीन बर्षमा उमेर २१ देखि २। सम्म लिनुपर्दछ। age० देखि 65 65 वर्ष सम्ममा, यदि परिणामहरू सामान्य रहिरह्यो भने स्क्रिनहरू प्रत्येक तीनदेखि पाँच वर्षमा गर्न सकिन्छ।
जोखिम कारक: प्राय: सबै गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सर मानव प्यापिलोमा भाइरस (HPV) द्वारा हुन्छ, जुन एक धेरै साधारण यौन संचारित संक्रमण हो। यस अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि अमेरिकी केन्द्रहरू (CDC), HPV यती सामान्य छ कि सबैजनाले यसलाई आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा प्राप्त गर्नेछन्। तर सबै तनावहरूले ग्रीवाको क्यान्सर निम्त्याउँदैन। केहि जननेंद्रिय वा छाला warts को कारण, र अरूले कुनै पनि लक्षण मा हुन सक्छ।
कसरी आफ्नो जोखिम कम गर्ने: त्यहाँ एउटा सुरक्षित र प्रभावी खोप HPV को लागी उपलब्ध छ भनिन्छ Gardasil9। यो ११ वा १२ वर्षको उमेरमा केटाहरू र केटीहरूको लागि सिफारिस गरिन्छ, तर यो9वर्षको उमेरमा वा or 45 वर्षको उमेर भन्दा कम उमेरको रूपमा प्रशासित हुन सक्छ। बच्चाहरूलाई गार्डासिलको दुई खुराक चाहिन्छ, छ महिनाको फरकमा। यदि तपाइँको बच्चाले १ age वर्षको उमेर पछाडि Gardasil को पहिलो खुराक प्राप्त गर्दछ भने, तिनीहरूले छ महिनाको अवधिमा तीन खुराक प्राप्त गर्नु पर्छ।
के उच्चतम तपाइँको रगतमा चिनी हुन सक्छ
स्क्रीनिंग परीक्षण: तपाईंको OB-GYN तपाईंलाई pap स्मीयर प्रयोग गरेर असामान्य ग्रीवा कोशिकाको लागि स्क्रिन गर्दछ। यो तपाईको योनीमा कपास swab सम्मिलित र तपाइँको ग्रीवा भर swabbed संग गरिन्छ।
सम्बन्धित: किन तपाईले HPV खोप लिनु पर्छ - तपाईको s० वा s० को दशकमा पनि
स्तन क्यान्सर स्क्रीनिंग उमेर: डा। मलिकका अनुसार औसत जोखिम भएका महिलाहरूको स्क्रीनिंग म्यामोग्राफी प्रतिवर्ष at० बाट सुरू हुन्छ, यदि त्यहाँ उच्च जोखिम छ भने। CDC दिशानिर्देशन सिफारिश गर्नुहोस् कि risk० देखि every two वर्षको उमेरमा प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक औसत जोखिम भएका महिलाहरूमा मेमोग्राम हुन्छ, र तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग screen० बर्ष उमेरदेखि सुरू गरी आफ्नो स्क्रीनिंग तालिका छलफल गर्नु पर्छ।
जोखिम कारक: यस अनुसार CDC , स्तन क्यान्सर विकासको लागि महिलाको जोखिम बढाउने धेरै कारकहरू उनको नियन्त्रण बाहिर छन्। जेनेटिक्स, उमेर बढ्दै, १२ बर्षको उमेर भन्दा पहिले तपाईको समयावधि सुरू गर्नुहोस् वा age 55 बर्ष पछि रजोनिवृत्ति, बाक्लो स्तन, र स्तन क्यान्सरको पारिवारिक इतिहास सबै जोखिम बढाउन सक्छन्।
कसरी आफ्नो जोखिम कम गर्ने: त्यहाँ केहि जोखिम कारकहरू छन् जुन नियन्त्रणयोग्य छन्। महिलाहरु गर्न सक्छन् स्तन क्यान्सर को जोखिम कम शारीरिक रूपमा सक्रिय रहन, स्वस्थ तौल कायम राख्न, र हर्मोनल जन्म नियन्त्रण, रक्सी, र चुरोट बेवास्ता गरेर। अनुसन्धानले यो पनि देखाउँदछ कि pregnancy० बर्ष भन्दा पहिले पहिलो गर्भावस्था हुनु र स्तनपानले स्तन क्यान्सर जोखिम कम गर्दछ।
स्क्रीनिंग परीक्षण: डाक्टरहरूले स्तन क्यान्सरको लागि स्क्रिन गर्न स्तनको कम्प्रेसनको साथ एक्स-रे जस्ता ममोग्राम प्रयोग गर्छन्।
पेट (वा कोलोरेक्टल) क्यान्सर
पेट को क्यान्सर स्क्रिनिंग उमेर: कोलन क्यान्सरका लागि, महिलाहरूले screen०, वा सो भन्दा पहिले स्क्रिनि begin सुरु गर्नुपर्दछ यदि उनीहरूको बृहदान्त्र मुद्दाहरूको कारण वा पारिवारिक इतिहासका कारण उनीहरू जोखिममा छन्, डा। फोर्टनर भन्छन्। बिरामीहरूले प्रत्येक वर्ष मलको टेस्ट प्राप्त गर्नुपर्दछ, तर सामान्य कोलोनोस्कोपी प्रत्येक १० बर्षमा एक पटक मात्र दोहोर्याउनु पर्छ, वा मलको परीक्षणबाट असामान्य परिणामहरू प्राप्त गर्दा। को CDC स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सिफारिसहरूको आधारमा फ्रिक्वेन्सीको साथ 50० बाट सुरू स्क्रीनिंग सिफारिस गर्दछ।
जोखिम कारक: कोलोन क्यान्सर जोखिम उमेर, आनुवांशिकता, र क्रोनस रोग र अल्सररेटिव कोलाइटिस जस्ता भ्वाडको आंत्र रोगको व्यक्तिगत इतिहासको साथ बढेको छ, डा। बेरेन्स भन्छन्। उनी भन्छिन्, अन्य क्यान्सरहरू जस्तै, कम आहार र सीमित शारीरिक गतिविधिले पनि पेटको क्यान्सर जोखिममा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। सुर्तिजन्य र मदिरा सेवनले कोलन क्यान्सरको जोखिम बढाउँदछ।
कसरी आफ्नो जोखिम कम गर्ने: फाइबर युक्त आहारले धेरै फलफूल र तरकारीहरू र धेरै थोरै प्रशोधन गरिएको खाद्य पदार्थहरू समावेश गर्दछ जसले तपाईंको कोलोन क्यान्सरको जोखिम कम गर्दछ। तपाईं अधिक व्यायाम र सुर्ती र रक्सी जोगिन पनि सक्नुहुन्छ।
स्क्रीनिंग परीक्षण: त्यहाँ केही छन् कोलन क्यान्सर स्क्रिनि forका लागि विकल्पहरू । सब भन्दा सामान्य एक कोलोनोस्कोपी वा fecal परीक्षण हो। पछिल्लो विकल्पको लागि, डाक्टरले स्टूलको नमूना स col्कलन गर्दछ र तपाईंको स्टूलमा रगतको सानो स्ट्रिकहरू खोज्दछ। यदि कुनै रगत पत्ता लागेको छ भने, डाक्टरले कोलोनोस्कोपी अर्डर गर्दछ। कोलोनोस्कोपीको बखत, तपाईं पहिले बेहोश हुन्छन्, त्यसपछि डाक्टरले तपाईंको मलाशयमा लामो, लचिलो उपकरण घुसाउँदछ र तपाईंको ठूलो आन्द्राको अर्को छेउमा धागो दिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टले तपाईंको कोलोनको भित्री भागको छवि प्रसारित गर्दछ त्यसैले डाक्टरले यसलाई असामान्यताहरूको लागि जाँच्न सक्छ। यसले चोट पुर्‍याउँदैन, तर यसले असहज, ग्यासी भावना गराउन सक्छ।
अधिकांश महिलाहरूलाई केवल ग्रीवा, स्तन र कोलोन क्यान्सरको लागि नियमित स्क्रीनिंगको आवश्यकता पर्दछ। जहाँसम्म, तपाईले आफ्नो प्राथमिक हेरचाह प्रदायकसँग वार्षिक राम्रो भेटहरू गर्नुपर्नेछ र सोध्नुहोस् कि यदि तपाईसँग कुनै विशेष जोखिम कारकहरू छन् जसले छाला, फोक्सो, गर्भाशय, वा गर्भाशय क्यान्सर जस्ता अन्य क्यान्सरहरूको लागि स्क्रिनको आवश्यकता देखाउन सक्छ।
केही क्यान्सरका जोखिम कारकहरू:
आइबुप्रोफेन को एक दिन कति मिलीग्राम
केहि आनुवंशिक रोगहरू
यो पूर्ण सूची होईन। तपाईंको प्राथमिक हेरचाह प्रदायकसँग तपाईंको स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस्।
क्यान्सर स्क्रिनिंगको कति खर्च हुन्छ?
धेरै बीमा योजनाहरु क्यान्सर स्क्रिनिंग कभर गर्दछ जुन तपाइँको उमेर र अन्य जोखिम कारकको आधारमा सिफारिस गरिन्छ। तर यदि तपाईंसँग बीमा छैन, त्यहाँ नि: शुल्क क्यान्सर स्क्रिनि receiving्हरू प्राप्त गर्नका लागि अन्य विकल्पहरू छन्।
योजनाबद्ध अभिभावक, संघीय-योग्य स्वास्थ्य केन्द्रहरू, र स्थानीय स्वास्थ्य विभागहरूले स्लाइडि fee शुल्क मा धेरै महिलाहरूको रोकथाम स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ, डा। बेरेन्स भन्छन्। प्रत्यक्ष प्राथमिक हेरचाह अभ्यास देश भर मा अवस्थित छन् र बीमा स्थिति को परवाह बिना सबै बिरामीहरुलाई सस्तो व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान गर्दछ, र तिनीहरूले स्क्रीनिंगको लागि सस्तो स्रोत संग स्व-भुक्तान बिरामीहरुलाई जडान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
Angiotensin II रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबी): प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
त्यहाँ कति प्रकारका रगत छन् र ती के हुन्
मेरो ह्या hang्गओभर बाट कसरी छुटकारा पाउने
म बीमा बिना नि: शुल्क जन्म नियन्त्रण कहाँ पाउन सक्छु?
कहिले सम्म एक योजना बी गोली काम गर्दछ
मेरो लार किन पातलो र बाक्लो छ?
त्यहाँ norco र vicodin बीच एक फरक छ?